उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनको ५३ औँ साधारणसभा एवं अधिवेशन शुरू : नेकपा सरकारको कर नीति ब्यवसायी मारा – नेपाली समाचारको स्रोत – bhandaforaviyan.com
| प्रकासित मिति : २८ पुस २०७६, सोमबार १५:४९
चितवन /उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनको ५३ औँ साधारणसभा एवं अधिवेशन आज बाट शुरू भएको छ । अधिवेशनको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले उद्घाटन गरेका छन । उनले आन्तरिक लगानीलाई आकर्षित नगरेसम्म मुलुकले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने बताएका छन् । उद्घाटन गर्दै उनले आन्तरिक लगानीलाई आकर्षित र व्यवस्थापन नगरी बाह्य लगानी जति ल्याए पनि त्यो मुलुकले समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने बताएका छन् । बाह्य लगानी आउनेतिर आकर्षण बढेको भन्दै उनले लगानीको सुरक्षामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
यता कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली काग्रेस चितवनका सभापति जीतनारायण श्रेष्ठले ब्यवसायीको हितलाई छोडेर नेताको चाकडी नगर्न चितवनका उद्योगी ब्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन । उनले कम्युनिस्ट सरकारले ब्यवसायीमाथी अस्वभाबिक कर लगाएको भन्दै व्यवसायीले त्यसको बिरोध गर्न छाडेको आरोप लगाएका छन । ‘ ब्यवसायीको ढाड सेक्ने गरी अस्वभाबिक ढङ्गबाट बढाईएको करको उवासंघले विरोध गर्न किन सक्दैन ’ श्रेष्ठले भने ‘ ब्यवसायी हितमा बोल्ने हिम्मत छ कि छैन ?’ ।
सभापति श्रेष्ठले महानगरले बढाएको करका विरुद्धमा बोल्न डराएको भन्दै उबासङ्घ चितवनको आलोचना समेत गरेका छन । उनले काग्रेस सहमतिको बाधक नभएको भन्दै अंध्यारो बन्द कोठामा गोला तानेर ब्यवसायीको हित नहुने बताएका । ब्यवसायी कमाई नभएर भाडा नतिर्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै वर्तमान सरकार भरतपुर महानगरको करनितिको खुलेर बिरोध गरे । पक्षमा बताउदैआफुहरु रहेको सहमतिकै पक्षमा रहेको तर गोला प्रथाको विरोधी रहेको बताए । ‘
किसानलाई व्यवसायिक खेतीतर्फ आकर्षित गर्ने उद्देश्यले १०औँ रत्ननगर
अमेरिकाले लगायो टिक टक र वी च्याटमा प्रतिवन्ध ! २८ पुस २०७६, सोमबार १५:४९
बलात्कार कि बार्गेनिङ ? २८ पुस २०७६, सोमबार १५:४९
विधिसम्मत पार्टी सञ्चालन गर्न नेताहरुको माग २८ पुस २०७६, सोमबार १५:४९
गृहकै कर्मचारीद्वारा सशस्त्र प्रहरीका चालकको दुरुपयोग २८ पुस २०७६, सोमबार १५:४९
राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान रिपोर्टस् पुरानो लयमा फर्कन नौ महिना लाग्ने २८ पुस २०७६, सोमबार १५:४९
सिंहदरबार प्रवेशमा कडाइ २८ पुस २०७६, सोमबार १५:४९
देशभर कोरोना सङ्क्रमण दर उच्च, उपत्यकामा अझ खतरा २८ पुस २०७६, सोमबार १५:४९
मृगौला पिडित श्रेष्ठद्धारा सहयोगको याचना २८ पुस २०७६, सोमबार १५:४९
प्राविधिक क्षेत्रका कर्मचारी धेरै भ्रष्ट २८ पुस २०७६, सोमबार १५:४९
ओली–प्रचण्ड वार्ता : सचिवालय र स्थायी समिति बैठकमै अडान २८ पुस २०७६, सोमबार १५:४९
लापरवाहीले फैलियो कोरोना २८ पुस २०७६, सोमबार १५:४९
यसरी सल्किँदै छ संक्रमण, स्थिति भयावह बन्दै २८ पुस २०७६, सोमबार १५:४९